Android အတွက် VATTSUN Apk ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ [Social Tracker] - Luso Gamer
Android အတွက် VATTSUN Apk ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ [Social Tracker]
ဇြန္လ 11, 2022 by John Smith
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် စကားပြောဆိုခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်ဟု ယူဆသော်လည်း၊ ဒါပေမယ့် အရင်းမြစ်တစ်ခုတည်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ မကောင်းမှုတွေအကြောင်းပြောရင် အဲဒါတွေက ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။ ထို့ကြောင့် ဤနေရာတွင် ကလေးများ၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် မိဘထိန်းချုပ်မှုကို အဓိကထား၍ VATTSUN ကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဤသည်မှာ မိဘများနှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အွန်လိုင်း မိဘအုပ်ထိန်းခြင်း android အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်တန်းကျသော အကြောင်းအရာများနှင့် ဆိုးသွမ်းသူများကဲ့သို့သော မကောင်းမှုများမှ ချစ်ခင်သူများကို ထိန်းချုပ်ရန်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင့် ကလေးတွေက မကောင်းမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ သူတို့က အခိုင်အမာပြောနိုင်တယ်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အာရုံစိုက်ပြီး သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေ အမျိုးအစားခွဲထားရင်တောင်။ ထို့နောက် Whatsapp သည် စကားပြောခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းအတွက် အသုံးအများဆုံးနှင့် အကြံပြုထားသည့် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မော်နီတာကလေးများကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် developer မှ ဤအသစ်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ခြေရာခံခြင်းအက်ပ်.
Vattsun Apk ဆိုတာဘာလဲ
Vattsun Android သည် Learydark Soft မှတီထွင်ထားသော android မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းကိရိယာကို ပြီးပြည့်စုံသောအွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ခြေရာခံခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံး အစားထိုးအက်ပ်ကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ စစ်မှန်သောအရင်းအမြစ်ကို ပေးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ မိဘများသည် လှုပ်ရှားမှု၏ လက်မတိုင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး၊
အင်တာနက်သည် လူသားများအတွက် သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ အကြီးမားဆုံး ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုမှတစ်ဆင့် လူများသည် ခံနိုင်ရည်မရှိဘဲ အွန်လိုင်းတွင် ဖိုင်များကို ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူများပင်လျှင် ဆက်သွယ်ရေး ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အဆောက်အအုံကို အသုံးပြုကြသည်။
အင်တာနက် developer များသည် အဆိုပါ မတူညီသော အွန်လိုင်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များကို တီထွင်ရန်အတွက် တာဝန်မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်မရှိရင် အဲဒီအက်ပ်တွေက တကယ့်အစစ်အမှန်အတွက် လုပ်ဆောင်လို့မရပါဘူး။ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ လူတွေအတွက် အထောက်အကူသစ်တွေ ယူဆောင်လာပေးတယ်။
အားသာချက်များနှင့်အတူ အခြားသော အားနည်းချက်အသစ်များလည်း ပေါ်လာပါသည်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ မကောင်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လူတွေက စိုးရိမ်နေကြပါပြီ။ မီဒီယာသတင်းရင်းမြစ်များကို အလွဲသုံးစားလုပ်မှုကြောင့် ကလေးငယ်အများအပြားပင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
အရွယ်3ကို MB
package အမည် com.learydarksoft.vattsun
အမျိုးအစား App များ - မိဘအုပ်ထိန်း
ရင့်ကျက်သောစိတ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုများကြောင့် ကလေးများသည် ယင်းတို့ကို အသုံးမပြုရန်နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မိဘများသည် ၎င်းတို့၏ သားသမီးများကို ထိုနည်းပညာဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများနှင့် ဝေးဝေးတွင် မထားနိုင်ပေ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အခုခေတ်မှာ နည်းပညာဆိုတာ ရှောင်လွှဲလို့ မရဘူး။
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အခြားမကောင်းသော လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် လူတိုင်းသိကြသည့်အတိုင်း။ WhatsApp ကို အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ကလေးများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို စောင့်ကြည့်ပြီး ခြေရာခံရန်၊ developer များသည် ဤ android application အသစ်ကို ယူဆောင်လာရာတွင် အောင်မြင်ပါသည်။
၎င်းသည် အခမဲ့ဝင်ရောက်နိုင်ပြီး နောက်ထပ်ခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ပါ။ ခြေရာခံအပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် မိဘများအား အသိပေးချက်ပုံစံဖြင့် လတ်တလောလုပ်ဆောင်မှု အချက်အလက်အားလုံးကို ရရှိရန် ကူညီပေးပါမည်။ အကြောင်းကြားချက်များကို ဖတ်ရှုခြင်းသည် လူ၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို နားလည်ရန် ကူညီပေးပါမည်။
အပလီကေးရှင်းကို တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ ပထမဦးစွာ Apk ဖိုင်၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ဤနေရာမှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ထို့နောက် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ပြီး သင်ခြေရာခံလိုသော နံပါတ်ကို မြှုပ်နှံပါ။
WhatsApp နံပါတ်ကို ထည့်သွင်းခြင်းမရှိဘဲ အကောင့်ကို ခြေရာခံရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိရပါ။ ဤကိရိယာ၏အကောင်းဆုံးအချက်မှာ၎င်းသည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းမုဒ်နှစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် အပလီကေးရှင်းကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး VATTSUN ဒေါင်းလုဒ်ကို ထည့်သွင်းပါ။
အက်ပ်ကို ပေါင်းစည်းခြင်းသည် မတူညီသော ပရီမီယံရွေးချယ်ခွင့်များကို ပေးဆောင်သည်။
၎င်းတွင် မီဒီယာပလပ်ဖောင်းများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ခြေရာခံခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။
ထိုရင်းမြစ်များတွင် WhatsApp နှင့် အခြားဆက်သွယ်ရေးအက်ပ်များ ပါဝင်သည်။
၎င်းသည် အွန်လိုင်းနှင့် အော့ဖ်လိုင်းမုဒ် နှစ်မျိုးလုံးတွင် ချောမွေ့စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။
တွန်းအားပေးသတိပေးချက်များသည် မိဘများကို နောက်ဆုံးရသတင်းပေးလိမ့်မည်။
အပ်ဒိတ်များသည် မတူညီသော လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်လိမ့်မည်။
Chat၊ ခေါ်ဆိုမှု၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများနှင့် လက်ခံရရှိထားသော အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။
VATTSUN အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း
ဤအထူးသဖြင့် android မိဘအုပ်ထိန်းခြင်းကိရိယာသည် Play Store မှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော android စက်ပစ္စည်းများသည် Apk ဖိုင်ကို တိုက်ရိုက်ရယူ၍ ထည့်သွင်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုစက်ပစ္စည်းများသည် ဟောင်းနေပြီး လိုအပ်သော OS နှင့် တွဲဖက်၍မရပါ။
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်ပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်သော Apk ဖိုင်များကိုသာ ပေးဆောင်သောကြောင့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရပါမည်။ အသုံးပြုသူ၏လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုသေချာစေရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောစက်ပစ္စည်းများတွင် သီးခြားအက်ပ်ကို ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရတာ ချောမွေ့ပြီး လုံခြုံတယ်လို့ တွေ့ရှိရပါတယ်။
Apk ကို install လုပ်ဖို့ ဘေးကင်းပါသလား။
လုံခြုံပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အပလီကေးရှင်းများကို Play Store တွင်သာ ဖော်ပြထားပါသည်။ ထို့အပြင် ဤထုတ်ကုန်ကို Play Store မှလည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဒေါင်းလုဒ်အပိုင်းအတွင်း Apk ကို မကမ်းလှမ်းမီပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော စက်များတွင် ထည့်သွင်းပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
မိဘများအတွက် ထုတ်ဝေသည့် အခြားသော စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် ခြေရာခံခြင်း အပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။ အခြားအကောင်းဆုံး အခြားရွေးချယ်စရာ အက်ပ်လီကေးရှင်းများကို ရှာဖွေရန် အောက်ပါ Apk ကို ထည့်သွင်းပါ။ ဘယ်ဟာတွေလဲ။ Kidsguard Apk နှင့် WhatsApp Monitor4Apk.
ထို့ကြောင့် သင်သည် အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ခြေရာခံခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို ရှာဖွေရာတွင် ရှုပ်ထွေးနေပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ အကြီးအကဲများ သို့မဟုတ် မိဘများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ပြီးလျှင် VATTSUN Apk ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား မိဘအုပ်ထိန်း, App များ Tags: ခြေရာခံခြင်းအက်ပ်, VATTSUN, VATTSUN Apk, VATTSUN အက်ပ်, VATTSUN ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ post navigation
Truck Simulator Vietnam Apk ကို Android အတွက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ [ဂိမ်းအသစ်]
Android အတွက် Baba Injector Apk ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ [Tools]